ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၈)ရက်နေ့မှာ တိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးသွားခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းညီညီရဲ့ကျဆုံးနေရာလေးမှာ ဂုဏ်ပြုပန်းခွေ လာရောက်ချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ US သံရုံး – Cele Oscar
ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈) ရက်နေ့ က လှည်းတန်း လမ်းမ ပေါ်မှာ အသက်ပေး သွားခဲ့ ရတဲ့ မောင်ညီညီအောင်ထက်နိုင် ကတော့ အသက် (၂၃) နှစ်အရွယ်ပဲ ရှိသေးတဲ့ လူငယ် တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ညီညီအောင်ထက်နိုင် ရဲ့ မိခင်ဆိုရင် အညွှန့်တလူလူ တက်နေတဲ့ သားငယ်လေး ကို ဆုံးရှုံးလိုက် ရလို့ ရင်ကျိုး မတက် ဝမ်းနည်း နေရပြီး အမွှာ အစ်ကို ကလည်း အရမ်းငိုခဲ့ ရတာဖြစ်ပါတယ်။ညီညီ က ပညာတတ် လူငယ်လေးဖြစ်ပြီး အစ်ကိုဖြစ်သူ နဲ့ အတူ မိဘကို လုပ်ကျွေးပြုစုနေတဲ့ သားလိမ္မာလေး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး မိဘ အားကိုးရတဲ့ သားလေးက စောစီးစွာ ကြွေလွင့် သွားခဲ့ရ တာကြောင့် မိသားစုတွေ အနေနဲ့လည်း နေ့စဉ် ရက်ဆက် လွမ်းဆွတ် နေ ကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အချိန် ထိတောင် ပြည်သူ တွေက ညီညီအောင်ထက်နိုင် အသက်ပေးသွား ခဲ့ရတာ ကို မမေ့ မလျော့ သေးဘဲ သူကျဆုံးသွားတဲ့ နေရာလေး မှာ ပန်းတွေထားပေး နေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။မတ်လ (၃) ရက်နေ့ကဆိုရင် သူရဲကောင်း ညီညီ အတွက်လည်း UN က ဆုတံဆိပ် တစ်ခုကို ချီးမြှင့်ခဲ့ သေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ မနက်(၈) နာရီခွဲ မှာ ဆိုရင်တော့ US သံရုံး ရဲ့ တာဝန်ရှိ သူတွေက ညီညီအောင်ထက်နိုင် ကျဆုံးခဲ့တဲ့ နေရာကို လာပြီးဂုဏ်ပြု ပန်းခွေ ချီးမြှင့်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ဂုဏ်ပြု ပန်းခွေမှာ ဆိုရင်”In honor of those who have lost their lives.since the February 1 Coup.May we all remember their courage and dedication toabetter future for Myanmar.(ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့ အာဏာသိမ်းချိန်မှ စပြီး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ သူများအတွက် ဂုဏ်ပြုသည်။မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အနာဂတ် အတွက် သူတို့ ရဲ့ အပ်နှံမှု နဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိ ကို အောက်မေ့ သတိရကြပါစို့”ဆိုပြီး ရေးသား ထားတာဖြစ်ကြောင်းကို ပြန်လည် မျှဝေ ပေးလိုက် ပါတယ်။
ဖဖေျောဝါရီလ (၂၈) ရကျနေ့ က လှညျးတနျး လမျးမ ပျေါမှာ အသကျပေး သှားခဲ့ ရတဲ့ မောငျညီညီအောငျထကျနိုငျ ကတော့ အသကျ (၂၃) နှဈအရှယျပဲ ရှိသေးတဲ့ လူငယျ တဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ညီညီအောငျထကျနိုငျ ရဲ့ မိခငျဆိုရငျ အညှနျ့တလူလူ တကျနတေဲ့ သားငယျလေး ကို ဆုံးရှုံးလိုကျ ရလို့ ရငျကြိုး မတကျ ဝမျးနညျး နရေပွီး အမှာ အဈကို ကလညျး အရမျးငိုခဲ့ ရတာဖွဈပါတယျ။ညီညီ က ပညာတတျ လူငယျလေးဖွဈပွီး အဈကိုဖွဈသူ နဲ့ အတူ မိဘကို လုပျကြှေးပွုစုနတေဲ့ သားလိမ်မာလေး ဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုမြိုး မိဘ အားကိုးရတဲ့ သားလေးက စောစီးစှာ ကွှလှေငျ့ သှားခဲ့ရ တာကွောငျ့ မိသားစုတှေ အနနေဲ့လညျး နစေ့ဉျ ရကျဆကျ လှမျးဆှတျ နေ ကွရတာ ဖွဈပါတယျ။ဒီနအေ့ခြိနျ ထိတောငျ ပွညျသူ တှကေ ညီညီအောငျထကျနိုငျ အသကျပေးသှား ခဲ့ရတာ ကို မမေ့ မလြော့ သေးဘဲ သူကဆြုံးသှားတဲ့ နရောလေး မှာ ပနျးတှထေားပေး နကွေဆဲ ဖွဈပါတယျ။မတျလ (၃) ရကျနကေ့ဆိုရငျ သူရဲကောငျး ညီညီ အတှကျလညျး UN က ဆုတံဆိပျ တဈခုကို ခြီးမွှငျ့ခဲ့ သေးတာဖွဈပါတယျ။
ဒီနေ့ မနကျ(၈) နာရီခှဲ မှာ ဆိုရငျတော့ US သံရုံး ရဲ့ တာဝနျရှိ သူတှကေ ညီညီအောငျထကျနိုငျ ကဆြုံးခဲ့တဲ့ နရောကို လာပွီးဂုဏျပွု ပနျးခှေ ခြီးမွှငျ့ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ဂုဏျပွု ပနျးခှမှော ဆိုရငျ”In honor of those who have lost their lives.since the February 1 Coup.May we all remember their courage and dedication toabetter future for Myanmar.(ဖဖေျောဝါရီလ (၁) ရကျနေ့ အာဏာသိမျးခြိနျမှ စပွီး အသကျဆုံးရှုံးခဲ့ရ သူမြားအတှကျ ဂုဏျပွုသညျ။မွနျမာနိုငျငံ ရဲ့ ပိုမိုကောငျးမှနျသော အနာဂတျ အတှကျ သူတို့ ရဲ့ အပျနှံမှု နဲ့ ရဲစှမျးသတ်တိ ကို အောကျမေ့ သတိရကွပါစို့”ဆိုပွီး ရေးသား ထားတာဖွဈကွောငျးကို ပွနျလညျ မြှဝေ ပေးလိုကျ ပါတယျ။